Nzira nhatu dzeKushambadza Kwehupenyu Inogona Kukubatsira Iwe Kuita Zvakanyanya Kubva Mubhajeti Rako Muna 3 | Martech Zone
Mabhajeti ekushambadzira akadonha kusvika pazasi pe6% yemari yekambani muna 2021, kubva pa11% muna 2020.
Gartner, Iyo Yegore CMO Shandisa Survey 2021
Netarisiro yakakwira sekare, ino ndiyo nguva yekuti vatengesi vakwanise kushandisa uye kutambanudza madhora avo.
Sezvo makambani achigovera zviwanikwa zvishoma pakushambadzira-asi zvichiri kuda kudzoserwa kwakanyanya paROI-hazvishamise kuti. organic marketing mari iri kuwedzera mukuenzanisa nekushandisa ad. Organic kushambadzira kuedza senge yekutsvaga injini optimization (SEO) inowanzova inodhura-inoshanda pane inobhadharwa ads. Vanoramba vachiunza mhedzisiro kunyangwe vatengesi vamira kushandisa. Zvichitaurwa zviri nyore, organic marketing imari ine hungwaru kuchengetedza kubva kusingadzivisike kuchinjika kwebhajeti.
Saka, chii chinonzi formula? Kuti uwane zvakanyanya kubva mubhajeti rako uye kugadzirisa organic kushambadzira zvirongwa, vatengesi vanoda nzira dzakasiyana. Nemusanganiswa wakakodzera wemachiteshi-uye neSEO uye kubatana seyakanyanya kutarisa-iwe unogona kuvaka kuvimba kwevatengi uye kutyaira mari.
Sei Organic Marketing?
Vatengesi vanowanzonzwa kumanikidzwa kuunza mhedzisiro yekukurumidza, iyo inobhadharwa ads inogona kuunza. Nepo kutsvaga kweorganic kungasakubatsira iwe kuwana ROI nekukurumidza sekubhadharwa kushambadza, inobatsira inopfuura hafu yezvese trackable webhusaiti traffic uye zvinofurira zvinenge 40% yezvose zvakatengwa. Organic yekutsvaga ndeyekureba mutyairi wekushambadzira kubudirira iyo yakakosha mukukura kwebhizinesi.
Iyo organic kukura zano inopawo mukana kune vatengesi kuvaka hukama hunogara nevatengi. Mushure mekuisa mubvunzo muGoogle, 74% yevatengi nekukasira kupuruzira yakabhadharwa ads uye vimba neakanyanya kuvimbika organic mhedzisiro kupindura mibvunzo yavo. Iyo data hainyepi - organic yekutsvaga mhinduro inotyaira zvakanyanya traffic pane inobhadharwa ads.
Kupfuura mabhenefiti ekutyaira brand kuziva uye kuvimba kwevatengi, organic marketing inodhura zvakanyanya. Kusiyana neakabhadharwa ads, haufanirwe kubhadhara kune midhiya kuiswa. Yako organic kushambadzira mutengo tekinoroji uye headcount. Iwo akanakisa organic kushambadzira zvirongwa anofambiswa nezvikwata-mumba, uye vanoshandisa bhizinesi-giredhi tekinoroji kuyera.
Kubhadharwa kushambadza hachisi chinhu chekare, asi organic marketing chikamu chikuru cheramangwana. Izvi zvinonyanya kukosha se Google inoronga kubvisa wechitatu-bato makuki muna 2023, kuderedza kushanda kwema ads anobhadharwa. Nekubatanidza organic zvirongwa seSEO muurongwa hwako hwekushambadzira, iwe unowanzo kusangana nezvinangwa zvebhizinesi uye kuwana ROI yepamusoro.
Kuvandudza Organic Marketing Strategies muna 2022
Iko kukosha kunopihwa nekushambadzira kweorganic kunoita kuti ive chishandiso chine simba, kunyanya kumasangano ane bhajeti shoma rekushambadzira. Asi kukura kwe organic kunobudirira chete neiyo nzira chaiyo. Kuti uone kuti masangano ekutanga ekushambadzira ari kupi muna 2022, Conductor yakaongorora vanopfuura 350 vatengesi kudzidza nezve hurongwa hwavo hwegore uye kuona mafambiro ekushandisa.
Uye, maererano neongororo, izvo zvinonyanya kukosha zvevatungamiriri vedhijitari mukati memwedzi gumi nemiviri inotevera zvinosanganisira ruzivo rwevashandisi vewebhusaiti (UX), kushambadzira zvemukati, uye kubatana kwakasimba pakati pezvikwata.
Uine izvi mupfungwa, heino maitiro aungaita matanho ako kune inotevera nhanho uye kuwana zvakanyanya kubva mubhajeti rako rekushambadzira:
Shandisa simba reSEO. Kubudirira kushambadzira kunopa vanotsvaga zvemukati zvinopindura mibvunzo yavo-zvatinoreva se mutengi-kutanga kushambadzira. Kubva zvese B2B uye B2C vanoita sarudzo vanowanzotanga rwendo rwavo rwekutenga netsvakiridzo yavo, zvakakodzera kuisa mari muSEO. Asi keyword stuffing haikwidziri kutsvaga mazinga. Isa mberi kutsvagisa kwemazwi akakosha uye ongororo yehunyanzvi kuti uone kuti injini dzekutsvaga dzinogona kunyatso ratidza zvirimo zvewebhusaiti.
Kuti uwedzere kukanganisa, dyara mune organic kushambadzira chikuva uye mune-mumba SEO timu kuti ive nechokwadi chekambani-yakafanana kuenderana mune zvemukati machaneli ane SEO mazano.
Batira pamwe kune yakanakisa UX. Maererano ne digitaalinen vatungamiriri, kuchengetedza UX yakanaka yewebhusaiti yemhando yako kwakakosha muna 2022-asi hazvigoneke pasina kubatana. Vashandi muwebhu, SEO, uye zvemukati mabasa vakawana vanhu vari mune mamwe mabasa kuti vabatane isingasviki 50% yenguvae. Kudimburwa uku kunogona kukonzeresa nyore kuita basa rakapetwa, mabhodhoro, uye zvisingaenderane SEO maitiro. Kubudirira zvirongwa zveUX zvinosanganisira kutaurirana nguva dzose pakati pemadhipatimendi, kuratidza kukosha kwekupwanya silos yesangano. bhonasi yakawedzerwa ine yakanakisa UX? It inovandudza nzvimbo dzako dzekutsvaga paGoogle.
Yera zvabuda. Dingindira rakajairwa ongororo yedu yakafumurwa kudiwa kwekuyera kubudirira kwe SEO zvirongwa muna 2022. Kuramba uchiongorora kushanda kweSEO matekinoroji uye maitiro anogona kuzivisa zvaunokoshesa.
Zviitire zvakanaka: asati kuita yako SEO chirongwa, tarisa kuti ndeapi metrics aunozotarisa (semuenzaniso, traffic, keyword chinzvimbo, uye musika share) uye kuti uchayera sei mibairo. Izvi zvinokugonesa kukwenenzvera zvirimo uye kuisa pamberi pezvirongwa zvinoshanda zvakanyanya-zvichikuchengetedza iwe nguva nemari.
Iyo yakaderedzwa yekushambadzira bhajeti haifanire kureva yakaderera-yemhando yekushambadzira hurongwa hwe2022 - iwe unongoda kukwirisa zviwanikwa zvako. Iine zano rakasimba uye yakatarisana nekushambadzira organic, unogona kuvaka kuvimba kwevatengi uye ruzivo rwemhando paunenge uchityaira mari.
Kuda kudzidza zvakawanda? Tarisa uone mushumo wazvino waConductor:
Iyo State of Organic Marketing muna 2022
Tags: 202020212022gore negore cmo kupedza ongororomutyairigartnerkushambadzira bhajetiorganic kukura zanokushambadzira kwehupenyuorganic search marketingdzoka pakushambadzira mariromiSearch Engine Optimizationkutsvaka injiniseomamiriro ekushambadzira kweorganicux
Lindsay Boyajian Hagan ndiye VP weKushambadzira pa kondakita, inokurukura kuti mabhizinesi anogona sei kugadzira akabatana, omnichannel dhijitari nzira dzekushambadzira, uye kwete kutarisa kune chero chiteshi chekuzviparadzanisa nevamwe. Iye zvakare anoenda zvakadzama mukuti sei organic marketing investments iri kuwedzera uye kukosha kwayo kuindasitiri.
ReferralCandy: Yakazara Ecommerce Referral Platform Iwe Unogona Kutangisa MuMaminitsi